Dowlada oo Ciidamo u direy sa Maleeshiyaadka ku dagaalamay Gobolka Mudug | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Dowlada oo Ciidamo u direy sa Maleeshiyaadka ku dagaalamay Gobolka Mudug
Dowlada oo Ciidamo u direy sa Maleeshiyaadka ku dagaalamay Gobolka Mudug
aliska qeybta 21aad ee Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ka howlgalla deegaannada Galmudug ayaa waxaa ay Ciidamo farabadan u direen deegaannada lagu dagaalamay ee hoostaga degmada Towfiiq iyo Tuulada Afbarwaaqo ee Gobolka Mudug.
Ciidamadaan oo wata Gaadiidka dagaalka ayaa waxaa ay ka ambabaxeen Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug,waxaana, iyaga oo kaashanaya Ciidamada isku dhafka ah ee xasilinta ay kala dhex-geli doonaan labada maleeshiyo beeleed ee dirirtu dhex-martay.
Dhinaca kale Wararka ay heleyso Idaacadda Risaala ee Magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in Magaalada Gaalkacyo ay gaari doonaan Saraakiil uu hoggaaminayo taliyaha Ciidamada lugta ee xoogga dalka Janeraal Candi Xamiid Maxamed Dirir si ay uga qeyb qaataan joojinta iyo xalinta dagaalka Gobolka Mudug.
In kastoo xilligaan ay degan tahay xaalada deegaannadii lagu dagaalamay ee Bariga Gobolka Mudug ayaa hadana dadka deegaanadaas waxaa ay sheegeen inay cabsi dareemayaan maadaama maleeshiyaadka ay weli ishor-fadhiyaan.
Dagaalkii shalay markale labada maleeshiyo Beeleed ku dhex-maray duleedka degmada Towfiiq ee Gobolka Mudug ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen in ka badan 20 Ruux.